Ajụjụ ọnụ furu efu nke Steve Jobs, ugbua na Netflix | Esi m mac
N’afọ 1995, mgbe Steve Jobs Ọ gbara ọsọ NexT ma ka na-anọghị na ụlọ ọrụ ahụ ya onwe ya kere, ọ gbara ajụjụ ọnụ maka onye nta akụkọ Robert Cringely bụ nke ọ na-ekwu n'ezoghị ọnụ banyere mmalite onwe ya na nke ọkachamara. Ajụjụ ọnụ a ahụghị ìhè ruo ọnwa ole na ole mgbe ọ nwụsịrị na ugbu a Netflix tinye ya na katalọgụ ya.
Steve Ọrụ na Netflix
Na Applelizados anyị ekwuola ọtụtụ oge banyere ya Steve Jobs. The logician, i nwere ike iche, bụ ngalaba-guzobere Apple. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ dị mkpa karịa ihe e kere eke nke ụlọ ọrụ, ọ dịkarịa ala, nke a gbara akaebe site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ, documentales, ihe nkiri, edemede na ọbụlagodi egwu na opera nke metụtara ndụ na ọrụ mmadụ dịka ihe dị mgbagwoju anya.
N'afọ 1995, onye nta akụkọ Robert Cringely na-eme akwụkwọ maka PBS nke akpọrọ "The Triumph of the Geeks" na n'ezie, ọ chọrọ ọgbụgba-ama nke Steve Jobs.
N'oge ahụ Jobs Ọ na-arụ ọrụ ahụ ọ malitere mgbe ọchichichara ya "nke na-egbu mgbu" nke Apple, NexT, ihe ịga nke ọma ọzọ na ndụ ya. Afọ ole na ole fọdụrụ tupu ọ laghachite na ụlọ ọrụ nke ya onwe ya tọrọ ntọala na nke ọ ga-ahụ na njedebe nke enweghị ego zuru oke.
A gbara ajụjụ ọnụ ahụ ruo ọtụtụ ọnwa mgbe ọ nwụsịrị, obi abụọ adịghị ya na o jiri oge ahụ mee ihe, hụrụ ìhè ahụ. Ugbu a Netflix Ọ tinyela ya na katalọgụ m na-agwa gị, ị gaghị atụ uche ya.
N'ime ya anyị pụrụ ịhụ a Steve Jobs na-ekwu okwu na onye mbụ maka nkeji iri asaa na nsụgharị mbụ siri ike na ndepụta okwu. Site na akaebe nke otu o rere ụgbọ ala ya iji kwado ọrụ ya na ihe ọ chere mgbe a chụrụ ya na Apple ma ọ bụ mgbe mbụ o metụrụ kọmputa aka.
Ọ bụrụ na i furu efu "Steve Ọrụ: The Lost Interview" Mgbe n'oge ya ka agbasapụ ya site na Canal + mebiri emebi, ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ ya ọtụtụ oge ịchọrọ Netflix.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ajụjụ ọnụ furu efu nke Steve Jobs, ugbua na Netflix
Apple ghotara iTunes ahụhụ ma na-akwadebe mmelite